Pa-Oh MP3 » Blog Archive » အမှတ်တရ ကိုးကန့်မူ;ပေ;
By Khun Lazer • တစ်ကိုယ်တော်ခွေများ • 20 Mar 2012	ခွန်ဇင်ထွဋ်တစ်ကိုယ်တော် သီဆိုထားတဲ့ အမှတ်တရကိုးကန့်မူ;ပေ; အမည်ရ သီချင်းခွေ တစ်ခွေဖြစ်ပါတယ်။ ခွန်ဇင်ထွဋ်ရဲ့ အခွေဟောင်း တစ်ခွေဖြစ်ပါတယ်။ VCD Version ကိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ YouTube Channel မှာ တင်ထားပြီးပါပြီ။ အခွေနံပါတ် PaOh-29-01 ဖြင့်ရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(3) Download Link
(4) Download Link
(6) Download Link
(7) Download Link
(8) Download Link
(9) Download Link
(10) Download Link
(11) Download Link
(12) Download Link
ဗွေးစင် March 23, 2012 at 8:41 am	သီးချင်းဘာဖြစ်လို့ဒေါင်းမရသလဲ ….ဒီစီးရီးကြမှဒေါင်းမရတာပါ..ထပ်စစ်ဆေးပါဦး..
Reply	Admin-Khun March 23, 2012 at 12:38 pm	မွေးသြ နီသွမ်းသီး ပြန်စစ်ပေးပါမယ်ဗွေ … Download Link မချိတ်ရသေးလို့ပါဗွေ .. ။ အခုချက်ချင်း Link ချိတ်လိုက်ပါမယ်ဗွေ .. ကေ,ဇူ,တဲင်ငါ,သြ ..
Reply	ဗွေးစင် March 24, 2012 at 6:38 am	ကေဇူတင်းဒျား…..ခေတ်ပအိုဝ်းပေးဟွေး စွိုးခွိုအတားပအိုဝ်းအတားယံကတိုတက်နောဝ်…တားဝန်းအောဝ်းဒျားနီပအိုဝ်းပေးသီးအလောင်း၊၊
Reply	Admin-Khun March 24, 2012 at 8:04 am	သြ .. လဒျာ;သြဗွေ .. ကေဇူတင်;ဒျာ နီဗွေနေနေသြ Reply	ခွန်ရန်နိုင် (ပင်လောင်း ၊ လယ်လောင်းရွာ ) June 18, 2012 at 3:51 pm	ယံတဲ့ယံဒျား
တချင်ထဲင်းထဲင်းယင်းနော် K – Star ပအိုဝ်းပေးစွို့ဖုံးနော်
Reply	ခွန်မောင်ဝမ်း July 16, 2012 at 8:04 pm	ဟိုင်း သွ
Reply	Admin-Khun July 16, 2012 at 9:49 pm	ဒီမှာတော့ Download လုပ်လို့ရနေပါတယ်။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်နည်းကို အရင်ဖတ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမှာပါ။
Reply	khun lwin Oo August 22, 2012 at 3:57 pm	သီချင်းက ကောင်းပါသည်။
Reply	khun chit October 19, 2012 at 8:15 pm	ကျိုက်လို့ဒျာ; ကေ;ဇူ;တင်;ငါ; နော
Reply	Novise khemaဲ November 6, 2012 at 6:20 pm	ကအွဉ်းဒင်းဖေးဒါး ငေါဝ်းသချင်နဲုင်းယိုနောဝ် ဟွိုန်ဟောဝ်သရေငါးနောဝ်သွူ
Reply	Novise khemaဲ November 6, 2012 at 6:21 pm	ကောင်းပါတယ် သီချင်းတွေက
Reply	ုခွန်ချစ်မိုး January 15, 2013 at 3:03 pm	သီချင်းတွေကနားထောင်လို့ကောင်းတယ်
Reply	khunbahtoo/Taunggyi(ဖက်ကွံ;) March 15, 2013 at 10:26 pm	သီချင်းအကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်
Reply	minmin September 24, 2014 at 6:59 pm	ခွန်အောင် ခန့် 
Reply	aunghtey October 7, 2014 at 9:00 pm	1234
Reply	khunmgbway October 10, 2014 at 12:21 am	ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘူး
၂၄ နာရီအတွင်း: 709